guuleed | Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan | Page 232
Dhuuxa Waa Barnaamij Mug weyn oo lagu faaqido arimaha siyaasada Soomaaliya iyo dhacdooyinka Maalinlaha ee dhacaya. Waxaa inagala qeybgala siyaasiyiin,aqoonyahano iyo qeybaha kale ee bulshada. Dhageyso Dhuuxa wareysiyada 09 04 2016.	Read More »
Si aad uhesho qodobadii ku baxay warka duhur alfurqaan guji linkiga hoose oo dhageyso warka oo dhameestiran. Dhageyso Warka Duhur 09 04 2016	Read More »
Ciidamada Xarakada Shabaabul Mujaahidin oo La wareegay Aadan Yabaal.
Ciidamada Itoobiya oo maalmihii lasoo dhaafay ku sugnaa Aadan Yabaal oo dhacda shabeelaha dhexe ayaa maanta halkaasi isaga huleelay. Dadweynaha ku haray Magaalada ayaa soo dhaweeyay bixista Ciidamada Itoobiya. Ciidamoaad ubadan oo katirsan xarakada shabaabul Mujaahidiin ayaa durbadiiba la wareegay Magaalada. Qaar kamid ah odayaasha dhaqanka gobalka shabeelaha dhexe ayaa Alfurqaan usheegay in Ciidamada Xabashida qof madaxa looga jira ku ...	Read More »
Warka Subax waxaa kamid ah qodobada ku baxay oday Lagu dilay Buulo mareer.ismaaciil Cumar Geelle oo Guuleystay iyo Qodobo kale, Dhageyso Warka Subax 09 04 2016.lite	Read More »
Dhacdooyinka dunida islaamka waa barnaamij todobaadle ah oo lagu soo qaato dhacdooyinka dunida islaamka kuwooda ugu waaweyn iyo kalimado wacdi iyo waano ah oo ay jeediyaan qiyaadada iyo culimada rabaaniyiinta ee dunida muslimka. Halkan Ka Dhageyso Dhacdooyinka 08 04 2016.lite	Read More »
Dhuuxa Waa Barnaamij Mug weyn oo lagu faaqido arimaha siyaasada Soomaaliya iyo dhacdooyinka Maalinlaha ee dhacaya. Waxaa inagala qeybgala siyaasiyiin,aqoonyahano iyo qeybaha kale ee bulshada. Halkan Ka Dhageyso Dhuuuxa Wareysiyada 07 04 2016.	Read More »
Si aad uhesho qodobadii ku baxay warka duhur alfurqaan guji linkiga hoose oo dhageyso warka oo dhameestiran. Dhageyso Warka Duhur 07 04 2016.	Read More »
Waa sidee Xaalada Bulshada ee Gobalka Mudug.(Maqal)
Mid kamid ah Culimada diinta islaamka ayaa socod dheer ku maray qeybo kamid ah Gobalka Mudug oo ay ka jiraan Maamulo iska soo horjeeda. Sheekh Cali katiin ayaa kamid ah ducaada u istaagay fidinta diinta islaamka. waxa uu sharaxaad ka bixiyay waxyaabihii uu kusoo arkay Gobalka Mudug mudadii uu ku sugnaa. Arimaha dacwada iyo amniga ayuu sheekha soo hadal qaaday. ...	Read More »
Shacabka Muqdisho oo Looga Baaqay inay iska Dulqaadaan Dulmiga Lagu Hayo.(Maqal)
Magaalada Muqdisho caasimada Soomaliya waxaa ku sugan ciidamo shisheeye oo kamid ah soo duulayaasha. Maalmihii lasoo dhaafay magaalada waxaa ka socday raaf xoogan oo lagu qabqabtay in ka badan kun qof. Odayaasha dhaqanka Muqdisho ayaa ka hadlay dhibaatada kusii laba jibaarantay umadda Muqdisho. Nabadoon Cabdikariin Muuse Casir hoggaanka Odayaasha ku dhaqanka shareecada islaamka ee Gobalka Banaadir ayaa reer Muqdisho kula ...	Read More »
Dhageyso:Xamlada Itoobiya shabeelaha Dhexe oo Laga Hadlay.
Kolonyo ay la socdeen Ciidamo Itoobiyaan ah ayaa ujahaystay degmada Aadan Yabaal ee shabeelaha Dhexe iyagoo ka baxay Gobalka Hiiraan. Dhowr Cisho ayay usii socdaan Aadan Yabaal Walina Ma aysan gaarin degmada. Dagaallo Culus iyo Qaraxyo ayay la kulmayaan Ciidamada Itoobiya. xalay dagaal xoog leh oo muddo saacado socday ayaa lagu qaaday ciidamada Itoobiya oo ku sugan dulleedka Degmada Aadan ...	Read More »